72 guuradii ka soo wareegatay aas aaskii ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta ku beegan – STAR FM SOMALIA
Munaasabad lagu maamuusayo 72-guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa saaka ka socota magaalada Muqdisho, iyadoo fantasiyo iyo dhoolatus ay ciidamada ka sameynayaan fagaaraha Dugsiga Jen. Kaahiye Ex School Polizio.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Jen, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa hambalyo u diray qeybaha kala duwan ee ciidamada booliska, isagoo u rajeeyay in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan, nabad, bash-bash iyo baraare.
Munaasabada ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan Madaxda dowladda, Wasiiro, Taliyeyaasha ciidamada iyo marti sharaf kale.
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa la aas aasay 1943, waxaana muddooyinkan ku socday dib u dhis iyo qaabeyn, waxaana markii u horeysay ay ciidamada yeesheen qeyb ka mid ah ciidamada miino baarista iyo ciidamo si gaar ah u tababaran.
Sidoo kale ciidamada ayaa la soo baxay xeelado ka duwan kuwii hore oo ku aadan baaritaanka marka uu shil dhaco, iyadoo qaababkan ay la mid yihiin sida booliska caalamka ay wax u baaraan, marka uu dil, qarax ama shil kale uu dhaco.
Si kastaba ha ahaatee munaasabadda lagu maamuusayo sanad-guuradii 72aad ee aas aaska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco magaalooyinka dalka.